छोरीहरूले गरे बुबाको दा’हसं’स्कार, छिमेकीले मानेनन् छुन ! – Yuwa Aawaj
छोरीहरूले गरे बुबाको दा’हसं’स्कार, छिमेकीले मानेनन् छुन !
जेठ २६, २०७८ बुधबार 338
उदयपुर : आफन्त र दाजुभाइ नहुँदा कटारी नगरपालिका–५ बरमझियाका दुई जना दिदीबहिनीले सोमबार बुबाको मृ’त्युपछि आफैंले श-वयात्रा गरी ‘दा’हसं’स्कार’ गरेका छन् ।
स्थानीय ६० वर्षीय बालबहादुर मगरको मृ’त्युपछि छिमेकीले श’व छुन नमानेपछि १७ र २० वर्षीया छोरीले नै दा’ह-संस्कार गरेका हुन् ।बालबहादुर बसोबास गर्दै आएको बरमझियामा आफ्नो समुदायका आफन्त र दाजुभाइ छैनन् ।
दाजुभाइ र आफन्त नहुँदा स्थानीयले श’व छुन नहुने भन्दै पन्छिए । श’व नछुने तर अन्य सहयोग गर्ने भनेपछि १७ वर्षीया कुमारी र २० वर्षीया भगवती मगरले मगर सं’स्कारअनुसार श’वयात्रा गरी तवाखोलाको घा’टमा दा’ह-संस्कार गरेका हुन् ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गु’जारा गर्ने बालबहादुरको परिवार २०६१ सालतिर ओखलढुंगाबाट त्यहाँ झरेको हो । दुई छोरी र श्रीमतीसहित स्थानीय शिवहरि दाहालको जग्गामा सानो झु’प्रो हा’लेर बालबहादुर बसोबास गर्दै आएका थिए ।
परिवारका ४ जना नै कटारी बजार र आसपासको क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदु’री गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् ।माघ, फागनुदेखि पेटको स’मस्याले बि’रामी परेका बालबहादुर वैशाखदेखि घरमै थलिएका थिए ।
स्थानीयको सहयोगमा औ’षधोपचार गराए पनि निको नभएपछि घरमै थिए । बिरामी भएर घरमै थलिएर मृ’त्यु भएका बालबहादुरको मृ’त्युपछि को’रोना सं-क्रमणको कारण देखाउँदै स्थानीयले छुन नचाहेको समाजसेवी राजु मगरले बताए ।‘को’रोनासंक्र’मण फैलिएको अवस्थामा मृ’त्यु भएकाले पनि छिमेकीले श’व उठाउन अप्ठ्यारो मानेछन्,’
उनले भने, ‘मगर समुदायको भएकाले पनि अन्य स’मुदायका छिमेकीले छुन नहुने भन्दै पन्छिएछन् ।’ आफ्नै दाजुभाइ र अहिले आफ्नो आफन्त नभएकाले बुबाको दा’हसंस्कार र का’ज-कि’रिया आफैंले गर्ने निर्णय गरेको कु’मारी र भगवतीले बताए ।‘बुबाको हामी आफैंले श’वयात्रा गरेर ‘दा’हसंस्कार’ ग¥र्‍यौं’
उनीहरूले भने, ‘अब मगर सं’स्कार संस्कृ’तिअनुसार ‘का’जकि’रिया’ पनि गर्छौं ।’ स्थानीय छिमेकी र आफ्ना स’मुदायको सहयोग रहेको उनीहरूले बताए ।मगर सं’स्कारअनुसार ७ दिनमा बालबहादुरको ‘का’ज-कि’रिया’ सकिने राजुले बताए । डिल्लीराम खतिवडाले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
Prevभुजेलको साढे २ करोड उप`चार खर्च साउदीको एक अपस्ताल द्वारा मिनाहा ।
Nextकालीगण्डकीमा समातिएको ५५ केजीको विशाल माछालाई नाम्लोले बोकेर बजारमा बेच्न लगेको दृश्य भाइरल !